Nezvedu | Zvikamu Sichuan Groupeve Co., Ltd.
Basa redu: Ngatifarirei kupenya kwezuva.
Chiono chedu: Iko kune zuva, kune Groupeve.
Maitiro edu: Kubudirira kwevatengi, kuvimbika uye kuvimbika; Vhura hunyanzvi uye shingairira kugona.
Kugeza muzuva kunoita kuti tidziirwe uye tive neutano hwakanaka.
Takagara muhofisi yakakura uye tichinzwa zuva nyowani uye rakajeka richipfuura nepagirazi, tinotanga zuva rakabatikana uye rine zvibereko. Hapana chikonzero chekushushikana nekupisa uye nekukuvara kwezuva, nekuti jira rinotenderera rinogadzirwa neGroupeve Company, iyo isingagone chete kudzima mwenje wakasimba uye ultraviolet mwenje asiwo inogona kuendesa mwenje, kufefetedza, kupisa-kupisa, kuchengetedza nzvimbo uye kuchenesa nyore, ndosaka tichigona kunakidzwa nemaonero asina kuvharika uye kupenya kwezuva kwese nzira muhofisi.
Mushure meHondo Yenyika II, kudziyisa, kufefetedza, mwenje we fluorescent, siringi yakabatanidzwa yakave yakakurumbira muzvivakwa, asi zvivakwa izvi zvakakanganisa mwenje wechisikigo, saka zvivakwa zvehofisi zvine magirazi zvakaonekwa muma1950. Ivo vakapa yakafara maonero pasina chipingaidzo, icho chakasimudzira kuvandudzwa kwenzvimbo dzemahofisi muma1960. Muna 1958, Mies naJohnson vakagadzira iyo nhurikidzwa makumi matatu neshanu yeNew York Seagram Kuvaka nemagirazi emaketeni emadziro, kubvira ipapo, zvivakwa zvinegirazi zvakave zvichisimuka pasi rese. Roller Blinds ayo anogona kuwedzera anoshanda mwenje uye anovharira ultraviolet mwaranzi ndiyo yave yekutarisa.
VaHEHJ veGroupeve vakatsvaga uye vakatarisa mhando dzese dzezvigadzirwa zvemumvuri pasi rese, pakupedzisira vakawana jira iri rakasangana nemitemo yavo yakaoma. Muna 2001, Groupeve yakatumira batch yemidziyo yeTeslin, iyo yakasarudzika Telewala tekinoroji inoita kuti chigadzirwa chive nezvakanakira zvakawanda, kutumidza mashoma, hupenyu hwakareba hwebasa, nyore kuchenesa, kukwirisa uye huwandu hwakawanda hwesarudzo dzehupamhi. Iyo keteni kana roller inopofumadza vagadziri vanogona kusarudza hupamhi kubva 1.83m / 2m /2.5m / 3m, iyo inogona kudzora marara uye chengetedza mutengo. Yakaomarara mhando yekudzora inoita kuti zvigadzirwa zveGroupeve zviwane 98% chiyero chekushandisa, kudzivirira machira ekurasa nekuda kwekukanganisa.
Pakutanga, jira rakaumbwa kubva ku fiberglass uye PVC, mushure memakore matatu ekutsvaga; Groupeve yakashandisa polyester kutsiva girazi fiber kuti uwane chigadzirwa chitsva, icho chine mashandiro ari nani uye mutengo wakaderera. Yakakurumidza kuzivikanwa nemusika wepasi rose.
Parizvino, Groupeve yakagadzira zvinopfuura zviuru zviviri zvemhando dze roller roller machira, ayo anotumirwa kune nyika dze82 kutenderera pasirese. Zvakawanda uye zvivakwa zvehofisi zvegirazi zvakasarudza zvigadzirwa zveGroupe
Wira murudo uye unakirwe nezuva kubva muzvigadzirwa zveGroupeve.